I-CustomWeather neBannister Lake Form Partnership Yokwakha Amathuba Amabhizinisi Amasha ku-Broadcast and Digital Signage | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-CustomWeather neBannister Lake Form Partnership Yokwakha Amathuba Amabhizinisi Amasha ku-Broadcast and Digital Signage
Lezi zinkampani zombili zizosebenzisana ukusungula futhi zithengise izixazululo ezibandakanya umkhiqizo weBannister Lake's Chameleon kanye nedatha yesimo sezulu ekhethekile yeCustomWeather
IBannister Lake kanye neCustomWeather bamemezele namuhla ukuthi bangene ebudlelwaneni bokuthuthukisa amathuba amabhizinisi ahlanganyelwe futhi banike amandla abasebenzisi be-software ye-Bannister Lake's Chameleon ukufaka idatha yesimo sezulu esivela enkampanini yezulu ekhethekile, iCustomWeather, Inc. I-CustomWeather ingumhlinzeki wedatha yesimo sezulu ohola phambili embonini enesibikezelo ezindaweni ezingama-85,000 zomhlaba wonke ngezilimi ezingama-95, ezihlinzeka izibikezelo zokucaca okuphezulu kusuka kumodeli yayo yokubikezela efakazelwe, i-CW100.
Umkhiqizo weBannister Lake's Chameleon uyisixazululo sedatha yangempela nesikhathi sokuphatha esisetshenziswa kuwo wonke umkhakha wezokusakaza nowezimpawu zedijithali ukunika amandla nokugcwalisa izifanekiso zemifanekiso. Isixazululo sishayela abapiki bezindaba, imiphumela yokhetho, idatha yezimali, ukubheja, nezinye izinhlelo zokusebenza zokuhlela. I-Chameleon isetshenziselwa nezinhlelo zokusebenza zokwenza uphawu emoyeni, ukulawula nokugcwalisa izifinyezo, izimbungulu, ama-promos, kanye namabhodi "ezayo ngokulandelayo". I-Chameleon's RESTful API ivumela idatha ukuthi iguqulwe kabusha futhi isatshalaliswe ngobuchule ukusakaza izinjini zemifanekiso, njenge-HTML5, futhi ihlanganiswe nezinhlelo zokusebenza zeselula.
"Isoftware kaBannister Lake's Chameleon inikeza indlela entsha yokwandisa ukufinyelela kwethu emakethe yezokusakaza neyezimpawu zedijithali," kusho uGeoff Flint, uMongameli kanye ne-CEO yeCustomWeather. "Imikhiqizo yethu yesimo sezulu esezingeni eliphezulu ihlangene nobuchwepheshe beBannister Lake ekuphatheni idatha yesikhathi sangempela kanye nentuthuko yangokwezifiso inika inani elikhulu kumakhasimende abo."
“ICustomWeather inguzakwethu ofanele iBannister Lake. Idatha yesimo sezulu ingumthombo obalulekile wedatha yamakhasimende ethu kanye nokunemba kweCustomWeather nemikhiqizo ehlukahlukene yedatha inikeza umnikelo okhangayo kuzo zombili izimakethe zokusakaza nezedijithali ”, kusho uGeorg Hentsch, uMongameli, iBannister Lake.
Kokubili iCustomWeather neBannister Lake bazophishekela ngenkuthalo amathuba aphakamisa ubuchwepheshe bomunye nomunye ekwakheni idatha yesikhathi sangempela nezixazululo zesoftware yangokwezifiso. Njengabachwepheshe bedatha abanamakhono aqinile wokuthuthuka kudathabheyisi, ama-API, nezinhlelo zokusebenza, iBannister Lake design,
yakha, futhi isebenzise izixazululo ezisebenzisa imithombo yedatha efanelekile ngokuhleleka, njenge-CustomWeather, ukubandakanya izethameli nokuheha imali yokukhangisa.
Mayelana ne-Bannister Lake Inc.
I-Bannister Lake iyinhlangano ehamba phambili yokuxazulula izixazululo zobuchwepheshe bevidiyo ezibonisa ukusabalalisa ithelevishini, ikhebula, satellite, ama-audio / visual, izicelo zokwethulwa kolwazi, ama-esports, nezimpawu zedijithali emhlabeni jikelele. Izixazululo zenkampani zihlangana ngaphandle komthungo nengqalasizinda ekhona ngenkathi kuzanywa ukuhlanganiswa nokuboniswa kwemithombo yedatha yangaphandle, kuthuthukisa ukukhiqizwa kwanoma iyiphi inhlangano. Vakashela iBannister Lake online ku www.bannisterlake.com.
Ngaphambilini: I-Bluefish444 ingeza ukusekelwa kwe-KRONOS K8 kwe-Avid Media Composer kanye ne-Avid Pro Tools ngeWindows 2020.14.1 Faka Iphakheji
Olandelayo: IVUALTO igcina ukukhula phakathi kwezimo eziyinselele zemakethe